Gịnị bụ ọrụ nke kabinet?
Chassis cabinets bụ dị iche iche si kabinet nke safes, ịgba akwụkwọ cabinets, dị ka dị ọcha, Chassis cabinets na mgbakwunye ga-edebe dị ka kabinet ga nwere ụfọdụ ọrụ, ma na-enwe ezi ventilashion, ihe ka mkpa na-etinye Chassis cabinets ruru ka ngwá, otú e nwere ọtọ achọ ...GỤKWUO »
Network kabinet, nke a na-eji ikpokọta arịọnụ panel, nkwụnye na, nkwụnye na igbe ahụ, electronic akụrụngwa, na ngwaọrụ na n'ibu akụkụ na mmiri, ka ha wee na nwụnye igbe. Dị ka nke ugbu a ụdị, server kabinet, mgbidi kabinet, netwọk kabinet, ọkọlọtọ ca ...GỤKWUO »
1 preparatory mbụ, na-agwa ndị ọrụ na ikpe nke onye ọrụ adịghị emetụta nkịtị ọrụ nke ikpe nke kabinet. Mgbe ahụ dị ka netwọk topology Ọdịdị, ẹdude akụrụngwa, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ, ndị ọrụ na ihe ndị ọzọ ka guputa a dịgasị iche iche nke ihe, dị ka ...GỤKWUO »
Network kabinet ga nwere ezi oru arụmọrụ. Ọdịdị nke ahụ kabinet ga-dabere na eletriki, n'ibu Njirimara na ojiji nke gburugburu ebe obibi, iji hụ na Ọdịdị nke ahụ kabinet nwere ezigbo rigidity na ike, na ezi akpa iche, grounding, ...GỤKWUO »
Na iri abụọ na Century, ọmụma technology aghọwo mainstream ụdị. Mgbe niile, ọ dịghị ozi na-elekọta mmadụ na mmepe nke ugbu a. N'eziokwu, ọmụma nke mba dị iche iche dị anya n'ebe ndị kasị mma na-achọ, ma ọ bụ mkpa na-gbanwetụrụ iji wuchaa. Mgbe izugbe com ...GỤKWUO »
The nchekwa na nkwụsi ike nke kabinet wetara ihe ụdị mgbanwe
Na mmepe na mma nke nkà na ụzụ nke kabinet, ndị kabinet na ọtụtụ-eji dị iche iche ubi. Dị ka dị iche iche arụmọrụ nke akụrụngwa, ndị kabinet kabinet na-eji nwayọọ nwayọọ na-akpụ akpụ na ntụziaka nke iche iche. Iji chọpụta ma àgwà chassi ...GỤKWUO »
Gịnị na-atọ na isi ihe na-emetụta ọrụ ndụ nke haịdrọlik usoro?
All nke ngwaahịa nwere ojiji nke ndụ, ga-enwe mmepụta, na-eji, na njedebe nke atọ nzọụkwụ. Maka haịdrọlik usoro, ma ọ bụrụ na ojiji nke a ogologo oge na ojiji nke a ogologo oge, n'ihi ya, ọ bụ oge ịgbanwe. Nnọchi bụ naanị a na-akpatakarị nke haịdrọlik mgbapụta, n'ezie, mmetụta nke haịdrọlik ...GỤKWUO »
Olee otú iji gbochie plastic injection ebu nchara
A ọtụtụ ihe onwunwe na agbanwe ogologo oge ga-egosi nchara ọnọdụ. Na a nchara na-adịghị anyị metal ihe onwunwe bụ ihe kasị nke ọnọdụ ahụ. N'ihi na anyị na mmepụta ga-eji na ebu ga-erukwa nsogbu a. Na maka nsogbu a, anyị mkpa obibi, na ihe mere e a mere nke ...GỤKWUO »
China Changzhou elu n'ichepụta technology rụzuru
Seventh China Changzhou elu n'ichepụta technology rụzuru ngosi mma May 18, 2012 ụtụtụ, nke asaa China Changzhou merela agadi n'ichepụta technology rụzuru ngosi mma na Changzhou sayensị na Technology City ụkwụ gawa. Changzhou onyeisi obodo Yao Xiaodong p ...GỤKWUO »
ọ 2015 nnyocha e mere na akụkọ banyere mmetụta nke ụlọ ọrụ na Internet na-emepe emepe n'ọdịnihu ahịa ego
Na ozi afọ, Internet technology ka ịbanye n'ime akụkụ nile nke ndụ ndị mmadụ, na-agbanwe ndị mmadụ oriri àgwà na omume nakawa etu esi. The Internet na-ukwuu na-emetụta na-agbanwe agbanwe niile n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ. Ịgbaso n'uwe, 3C digital, home ngwa oru chai ...GỤKWUO »
Ụfọdụ Atụmatụ na ịzụ a netwọk kabinet
Na a uche, na netwọk kabinet dị ka N'onwe arụnyere na Chassis, cabinets na Chassis nwere ike kwuru na-abụ Olee ihe enyemaka otu, anyị na-na-na zuo nke netwọk Chassis nke nkà? The Wuhan kabinet emepụta JF nkwukọrịta na nkọwa. Akpa, netwọk kabinet tụlee ...GỤKWUO »